Home News Howlgal ka socdo Magaalada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan
Howlgal ka socdo Magaalada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan
Wararaka laga helayo Magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xalay xaafada howwadaag ee Magaaladaasi lagu dilay oo ka mid ahaa odiyaasha dhaqanka Gobolka Hiiraan.
Dabley hubeysan ayaa Nabdoonka dishay iyadoona halkaasi ay ka baxsadeen sida ay xaqiijiyeen Dadka Deegaanaka.
Ciidamo ka tirsan Maamulka hir shabelle ayaa goobta gaaray iyadoona halkaasi ka sameeyey baaritaano ay ku baadi goobayaan kooxdii falkaasi ka danbeysay.
Wararkii ugu danbeeyey ee saakay ayaa sheegaya in howgallo ay ka socdaan Magaalada Baladweyne kaasi oo lagu baadi goobayo kooxdii dilka ka geysatay Magaalada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan.
Previous articleGanacsatada Muqdisho oo maalin walbo xoog loogu qaado Lacag xoogan (Aqriso)
Next articleMasuuliyiinta Gobolka gedo oo diiday amar kasoo baxay Xafiiska Axmed Madoobe
Sidee ayuu Qoor-qoor ku xalin karaa Tabashooyinka Bulshada Reer Galmudug?
Farmaajo oo C/qeeybdiid o Balanqaaday Hal Milyan oo Dollar Iyo Odayaasha...